Iifowuni ezintsha zeSudio ETT ezinokurhoxiswa kwengxolo, inyani engenazingcingo kunye neeyure ezingama-30 zokuzimela | Ndisuka mac
Iifowuni ezintsha zeSudio ETT ezinokurhoxiswa kwengxolo, inyani engenazingcingo kunye neeyure ezingama-30 zokuzimela
I-Sudio yenye yeefemu ebezisebenza iminyaka kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu ngokwesandi kunye noyilo olusebenze ngokwenyani. Ngeli thuba, ifemi ikhupha amandla ayo apheleleyo anee-headphone ezingenazingcingo nazo Bongeza ukurhoxiswa kwengxolo kunye nemowudi yabo yokubonisa ebonakalayo evulekileyo ngexesha lokufowuna, ukuzimela okumangalisayo, ukumelana nokuqinisekiswa kwamanzi kwe-IPX5 nokunye okuninzi.
Singatsho ukuba ezi ntloko ziyakhuphisana kakhulu neApple, zombini kuyilo kunye nokubalulwa. Ngokusengqiqweni Ukuqhagamshela kwezi zixhobo zeApple kwahlukile kwinto esinokuyenza ngee-headphones zenkampani yeCupertino, kodwa oku kunokuba kuphela umahluko wokwenene phakathi kwezi modeli. ISudio iyafana nomgangatho kwaye ezi Sudio ETTs ziyibonisile kwakhona.
1 Siqala ngemixholo yebhokisi
2 Ukutshaja ngaphandle kwamacingo ngaphandle kwebhokisi
3 Umgangatho wesandi kunye nokuRhoxiswa kwengxolo eSebenzayo (ANC)
4 Imibala eyahlukeneyo iyafumaneka kwezi ETT
5 Isaphulelo kubasebenzisi bam beMac ngaphezulu kwe-10%
Siqala ngemixholo yebhokisi
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, into yokuqala ekufuneka siyenzile kukubona umxholo owongezwe kwezi ntloko zintsha kwaye ngokuchanekileyo sinayo yonke into oyifunayo kufuneka uyisebenzise ngaphandle kwebhokisi. Ibhokisi ecaleni kwendlela ineepakethe ezisemgangathweni njengamaxesha onke.
Ibhokisi yongeza ii-headphone ezingenazingcingo ngokwazo, ibhokisi yokutshaja enomtya omncinci wokuyibamba naphina (ingasuswa) a Intambo ye-USB A ukuya kwi-USB C yokutshaja kwentambo, imiyalelo yokusetyenziswa, kunye neepads ezininzi zobungakanani obahlukeneyo bokusebenzisa nazo.
Ukutshaja ngaphandle kwamacingo ngaphandle kwebhokisi
Ukutshaja kunye nokuhambisa ibhokisi yezi Sudio kunika ithuba lokutshaja ngekhebula le-USB C okanye sinako Sebenzisa nasiphi na isiseko sokutshaja ngaphandle kwamacingo esinaso. Ezi headphone zinika ithuba lokutshaja usebenzisa i-dock ye-Sudio okanye nayiphi na idokhi yokutshaja ngaphandle kwamacingo. Isiseko seSudio asinyanzelekanga ukuba siphumeze olu hlobo lwentlawulo, kodwa yinto enomdla kwabo bangenazo iziseko zokutshaja.
Ibhokisi inezibane ezine ezincinci ze-LED ukubonisa ukutshaja kwebhokisi kunye nayo Singabiza ii-headphone ubuncinci amaxesha amabini de ibhetri iphele kwezi. Oku kunokwahluka ngokuxhomekeke kumthamo esimamela kuwo umculo wethu.
Ubungakanani bezixhobo ezintsha zeSudio ETTs bancinci ngokuthelekiswa nezinye iimodeli esizifumana kwintengiso ezinempawu ezifanayo. Ezi Sudio ETTs bubungakanani obugqibeleleyo ziphathe epokothweni yebhulukhwe yakho ngaphandle kwengxaki.
Umgangatho wesandi kunye nokuRhoxiswa kwengxolo eSebenzayo (ANC)
Ukuba zii-headphone zeSudio sinokuzola kunye nomgangatho wesandi abasinikelayo. Ngokusengqiqweni Sijonge kwimveliso yaseTshayina kwaye oko kubonisa xa sidlala umculo wethu owuthandayo kubo.
Alithandabuzeki elokuba umgangatho wesandi uhamba kunye nomgangatho wokurhoxiswa kwengxolo uqobo eyongezwe kwezi Sudio kwaye uyilo lweendlebe zezi ntloko lubenza babe ludibaniso olugqibeleleyo kwezona meko zinamandla.
Banikezela nge Indlela yokubonisa ngokucacileyo yeMowudi intuitively yehlisa ukunciphisa ingxolo, ikuvumela ukuba uve ilizwi lakho ngokucacileyo, ukuba ufuna ukuphendula umnxeba ngalo naliphi na ixesha.
Incinci okanye akukho nto sinokuyihlambalaza kumgangatho wesandi wee-headphone zeSudio, kwiimodeli ezihlaziyiweyo zangaphambili nakwezi ETTs zintsha, umgangatho weaudio ungaphezulu kokuqinisekiswa.
Imibala eyahlukeneyo iyafumaneka kwezi ETT
Sinokubona kwiwebhusayithi kaSudio iimodeli ezahlukeneyo okanye kunoko imibala ekhoyo kule modeli yeefowuni. Kule meko sine umbala omhlophe, umbala omnyama, mnyama ngee-earphone zentsimbi ezantsi kwegolide, epinki kunye nombala oluhlaza.
Njengoko ubona, uneemodeli ezininzi ezikhoyo ukuze ukhethe eyona ilungele wena ngokubona. Ngale ndlela, imibala ixhomekeke kakhulu kumsebenzisi kunye ISudio ibonelela ngeendlela ezininzi onokukhetha kuzo eyona ikufanelayo.
Isaphulelo kubasebenzisi bam beMac ngaphezulu kwe-10%
Iveki yangoLwesihlanu oMnyama ilungile ngoku kwaye ukusuka kuSudio bafuna ukuvuza abasebenzisi endivela kubo eMac nge isaphulelo se-10% esisetyenziswa ngokudibanisa ikhowudi I-SDMBF ishiya ixabiso lokugqibela kwezi headphone ngaphezulu nje kwe-96 euro. Esi saphulelo songezwa kwi-25% esele besebenayo kwiwebhu ngoko ke lixabiso elifanelekileyo lokugqibela kwabo baSudio.
Ixabiso elithandekayo ngokwenene lelo lihlala likhona xa sisebenzisa izaphulelo ngexesha lokuthenga kwezi Sudio ETTs. Ukuba ujonge isipho esihle kuleKrisimesi Ngendlela yee-headphone kunye nohlahlo-lwabiwo mali oluhlengahlengisiweyo kwi-Sudio, ngokuqinisekileyo sibacebisa bobabini ngezipho kunye nokuzisebenzisa.
Thenga iSudio ETT yakho apha
Ibhokisi yezothutho iphawulwe ngokusetyenziswa
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Iifowuni ezintsha zeSudio ETT ezinokurhoxiswa kwengxolo, inyani engenazingcingo kunye neeyure ezingama-30 zokuzimela
I-Wi-Fi Explorer Pro 3 ihlaziywa kwi-MacOS Big Sur kunye neApple Silicon
I-Apple ipapasha iitreyila ezisi-7 zolu chungechunge lutsha iDoug Irobhothi engaqhelekanga